Uganda oo ka cabaneysa Gaadiid la’aan heysata ciidamadooda AMISOM ka tirsan .
Dowladda Uganda, ayaa shaacisay in Ciidamada howlgalka AMISOM gaar ahaan kuwa ka soo jeeda Dalka Uganda aysan heysan gaadiidka Dagaalka.
Afhayeenka Ciidamada militariga ee Dalka Uganda, Richard Karemire ayaa waxuu qiray in ay jirto Gaadiid la’aan heysa Ciidamada kaga sugan Soomaaliya.
Richard Karemire, ayaa u sababeeyay Weerarada gaadmada ah ee lagu qaado Askartooda qeybta ka ah howlgalka AMISOM in ay tahay gaadiid la’aan, waxaana uu intaasi ku daray in Ciidamadooda aysan u suuri galeyn in sidii loo baahnaa ay ugu safraan Waddada dheer ee isku xirta Muqdisho iyo Magaalooyinka kale.
Waxa uu ku baaqay in Gaadiidka Dagaalka loogu yabooho Ciidamad Uganda ee ku sugan gudaha Soomaaliya, kuwaasi oo qeyb ka ah howlgalka lagula dirirayo Xarakada Al Shabaab.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu Qaramada Midoobay waxa uu ka dalbaday in Diyaarado dagaal ay sidoo kale ku deeqaan howlgalka AMISOM.
Hadalka Afhayeenka Ciidamada militariga ee Dalka Uganda ayaa daba socda weerar dhawaan Xarakada Al Shabaab ay ku dileen Askar ka soo jeeda Dalka Uganda, xili ay ku safrayeen qeybo ka mid ah Gobolka Shabeelaha Hoose.
Dhinaca kale, Meydka 12 ka mid ah Ciidamada Uganda ee ku sugan gudaha Soomaaliya, ayaa la geeyay Dalka Uganda, kadib markii lagu dilay Weerar ay mas’uuliyadiisu sheegteen Xarakada Al Shabaab.
Weerarkaasi oo ahaa mid xoogan ayaa war ka soo baxay Xarakada Al Shabaab waxaa lagu sheegay in lagu dilay 39 ka mid ahaa Ciidamada Uganda ee qeybta ka howlgalka Nabad Ilaalinta ee AMISOM.
Balse, Dowladda Uganda ayaa beenisay warkii ka soo yeeray Al Shabaab, waxaana Uganda ay shaacisay in 12 Askari looga dilay Weerarkaasi, islamarkaana looga dhaawacay 7 kale oo xaaladooda caafimaad haatan lagu dabiibayo isbitaal ay Taliska AMISOM ku leeyihiin Magaalada Muqdisho.
XXarakada Al Shabaab ayaa inta badan Weeraro gaadmo ah ku qaada Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM, kuwaasi oo ku sugan qeybo ka mid ah Gobolada dhaca Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya.